Akwụkwọ ntuziaka lathe, Economic CNC lathe Machine, Nrụgide oru Ewepụghị ndina CNC lathe machining Center - Guangzhou South Lathe Machine Ngwaọrụ Company Limited
ịghasa-ọkwọ ụgbọala eme igwe
Guangzhou South Lathe Machine Ngwaọrụ Company Limited
Guangzhou South Lathe Machine Tools Company Limited nwere na Guangzhou Panyu district nke dị na nkà na ụzụ na-emepe emepe obodo. Lọ ọrụ ahụ na-ekpuchi karịa 30000 square mita. Ọ dị nso na Guangzhou mahadum Town, n'ezie otu osimiri kewara. Directlynweta kpọmkwem site ụzọ ụgbọ oloko No.4 na ọ kachasị mma iji nweta ọdịda na njem ụgbọ ala. O nwere ihe karịrị 20 afọ iji chepụta ma mepụta igwe akwụkwọ ntuziaka, oké ọrụ ewepụghị bed CNC lathe igwe, ewepụghị bed bed CNC lathe igwe, obere ọrụ slanting bed CNC lathe igwe, CNC lathe machining center na ahaziri igwe niile ahịa si n'ụwa nile.
Igwe na-eme ọkwọ ụgbọ ala ịghasa
360mm na-agbanye n'elu akwa CNC lathe –1000mm machining ogologo
360mm na-agbanye n'elu akwa CNC lathe –750mm machining ogologo
Anyị, SOUTH Lathe Machine Tools Company Limited nwere ike ime OEM imewe na ODM maka ndị ahịa ọ bụla site na ikpuru.
Anyị na-eme igwe anyị ma na-agba ọsọ ụlọ ọrụ anyị dịka TO ISO9001. Usoro njikwa: nke mbụ , anyị na-eme nnyocha nlele mbụ maka ngwa anyị nke ụlọ ọrụ anyị . Nke abuo , anyị na-achịkwa usoro maka ngwa anyị. N'ikpeazụ anyị na-eme nyocha ikpeazụ na nyocha maka igwe anyị. Nnyocha ndị dị na mpụga: Anyị na-eme nyocha maka ihe ọ bụla anyị zụtara site na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
24 awa n'ahịrị maka igwe anyị . Ekwentị / Whatsapp / WeChat: +86 139 28187729
500mm siwing bed bed CNC lathe machining center-350mm machining ogologo
500mm na-agbanye n'elu akwa CNC lathe –1500mm machining ogologo
500mm siwing akwa bed CNC lathe-1500mm machining ogologo
560mm na-agbanye n'elu akwa CNC lathe –1000mm machining ogologo
Bar feeder CO65 nkọwapụta
mmanụ na-ebugharị ihe oriri mmanya mmanya ihe dị n'obosara Ø8-Ø18, Ø18-Ø26, Ø26-Ø34, Ø34-Ø42
350mm na-agbanye n'elu akwa CNC lathe–200mm machining ogologo
Otu nkwụsị ngwọta maka oru ngo gị si ahịa
Ike ike maka itinye aka na-akwado ọrụ gị.
CNC bụ igwe anaghị agba nchara
Kedu ihe ndị ịchọrọ ịma gbasara igwe CNC Lathe?
Kedu ihe eji igwe CNC Lathe eme ihe na ụlọ ọrụ mpempe akwụkwọ na Ngwuputa?
Uru nke CNC Lathe Machine
Jiri lathe dị arọ dochie lathe Light-Duty
Nweta kacha mma ALPHA Arọ Ọrụ CNC Lathes ugbu a!
Guangzhou South Lathe Machine Ngwaọrụ Company Limited © 2022 IKIKE NIILE ECHEKWABARA usoro ojiji na Nzuzo sex dolls Japanese Sex Doll Adult Sex Dolls Muñecas sexuales Sexpuppen Bambole del sesso Poupées Sexuelles Секс куклы